Akhriso: shanta macallin ee u sharraxan beddelka Julen Loptegui. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Akhriso: shanta macallin ee u sharraxan beddelka Julen Loptegui.
Isniin, October, 22, 2018(HNN) Naadiga Real Madrid ayaa lagu soo warramayaa inay caddeysay in dookheeda koowaad uu yahay Santiago Solari inuu beddel u noqdo Julen Lopetegui, kaadoo cadaadis xooggan dhexda kaga jira.
Lopetegui ayaa la rajeynayaa in laga raacdeeyo Bernabeu, inkastoo ay macquul tahay in kullanka Champions League ee Viktoria Plzen uu hooggaamiyo Los Blancos iyo kullanka Barcelona ee El Classcio kuwaasoo si dhab ah u go’aamin doonaan shaqadiisa.
Hase ahaatee, Real Madrid waa ay ka war qabtaa in lala xiriirinayo tababareyaal badan sida laacibkeedii hore ee Guti, inkastoo Marca ay sheegeyso in Solari uu yahay uu dookha ugu weyn ee Real Madrid magacaabi karto.
Sidoo kale Marca waxa ay soo shaacisay liis ay ku jiraan afar macallin oo hor leh, waxaana ka mid ah macallinka qaranka Belgium ee Roberto Martinez.
Macallinkan Spanish-ka ah ayaa shaqada Everton laga eryay ka hor inta uusan Belgium-ka hooggaaminin, waxaana lagu soo warramayaa inuu diyaar u yahay kusoo laabashada dalkiisa hooyo si kooxaha waaweyn uu shaqo kaga qabto.
Martinez waxa uu liiskan kula biirray Antonio Conte, kaasoo xagaagan laga eryay shaqada Chelsea, welina wax shaqo ah ma uusan qabanin, musharraxiinta Marca ay caaleemaysay ayuuna ku jiraa.
Sidoo kale waxaa liiskan ka mid ah Laurent Blanc oo shaqo la’aan ah tan iyo markii uu 2016 ka tagay shaqada Paris Saint-Germain iyo Michael Landrup oo si la yaab leh ugu jira musharraxiinta beddeli kara Julen Lopetegui.
Akhriso: shanta macallin ee u sharraxan beddelka Julen Loptegui. added by admin on 22/10/2018